UCarlos Ruiz Zafón: ukuphikelela komphefumulo ngezinhlamvu | Izincwadi Zamanje
UCarlos Ruiz Zafón: izincwadi
UCarlos Ruiz Zafón wayengomunye wababhali besikhathi esivelele bekhulu lama-XNUMX. Akusizi ngalutho ukuthi ubhekwa njengomunye wababhali bezincwadi ezifundwa kakhulu emhlabeni, kuphela ngemuva kukaCervantes; lokhu kubonga umsebenzi wakhe ovelele kakhulu: Isithunzi somoya (2001). Le noveli yadweba umsebenzi womlobi futhi ichazwe ngabagxeki ngokuthi: “… enye yezambulo ezinhle kakhulu zemibhalo ezikhathini zakamuva”.
Umbhali wamanoveli wayenesitayela sakhe, lapho ahlanganisa khona izinhlobo ezahlukene zemibhalo. Wabamba ekudalweni kwakhe into enhle kakhulu eyenziwe isakhiwo ngasinye en into eyingqayizivele futhi engenakuqhathaniswa. Kuwo wonke umsebenzi wakhe imisebenzi yakhe yahunyushelwa ezilimini eziningi, ngayo ikwazile ukunqoba abafundi abangaphezu kwezigidi ezingama-25, owayehlale ebheke phambili ezindabeni zakhe ezingavamile.
1 Imininingwane yomuntu
1.1 Izifundo zokuqala nezinyathelo zokubhala
1.2 Izifundo zaseYunivesithi kanye nesipiliyoni sobungcweti
2 Umjaho wezincwadi
2.1 Ukufa ngaphambi kwesikhathi
2.2 Amanoveli kaCarlos Ruiz Zafón
3 Ezinye izincwadi zikaCarlos Ruiz Zafón
3.1 INkosana yeMist (1993)
NgoLwesihlanu ngoSepthemba 25, 1964, idolobha laseBarcelona labona ukuzalwa kukaCarlos Ruiz Zafón. Iqembu lakhe lomndeni lalakhiwa ngubaba wakhe, uJusto Ruiz Vigo, i-ejenti yomshuwalense; umama wakhe, uFina Zafón, nomfowabo omdala, uJavier. Kusukela eseyingane, wakhombisa ubizo njengomlobi nomcabango omkhulu. Ubufakazi balokhu kwakuyizindaba ezinamakhasi amathathu azibhala ngesikhathi esengumntwana, enezindikimba zokwesaba namaMartian.
Izifundo zokuqala nezinyathelo zokubhala
Uqede izifundo zakhe zokuqala ekolishi lamaJesuit: iSan Ignacio de Sarrià, isakhiwo esakhuthaza ubudlelwano bakhe nesitayela seGothic. Lapho eneminyaka engu-15, wagcwalisa inoveli enamakhasi angama-600 ngokuya ngemfihlakalo kaVictoria: I-Harlequin Labyrinth. Umbhalo uthunyelwe kubashicileli abehlukene, kepha awushicilelwanga. Kulokho okwenzeka, wathola izeluleko ezibalulekile kumhleli we-Edhasa: Francisco Porrúa.
Izifundo zaseYunivesithi kanye nesipiliyoni sobungcweti
Wangena e-Autonomous University of Barcelona ukuyokwenza izifundo ze-Information Sciences. Ngenkathi enza unyaka wakhe wokuqala wezifundo, wafaka isicelo sokusebenza ezinhlanganweni ezahlukahlukene zokukhangisa. Wakwazi ukuqashwa ngu I-Dayax, lapho aphakama khona waba umnikeli waba ngumbhali wamakhophi. Kamuva, usebenze nezinye izinhlaka ezibalulekile, njenge: Ogilvy, I-Tandem / DDB y Iqembu likaMc Cann World.
e 1992, URuiz Zafón uthathe isinqumo sokuthatha umhlalaphansi emkhakheni wokukhangisa futhi wazinikela ngokuphelele ezincwadini. A) Yebo waqala ukubhala inoveli eyimfihlakalo nefantasy, eyafinyelela umvuthwandaba ngonyaka olandelayo: INkosana yeMist. Ngokwesincomo sentombi yakhe, wamethula emncintiswaneni yezincwadi intsha kusuka kumshicileli U-Edebé, onqobile. Ngokuhambisana nomklomelo, wathola imali enkulu ngaleso sikhathi.
Umbhali uthathe isinqumo sokutshala imali yomklomelo ngokulandela ezinye izinkanuko zakhe, i-cinema, kanjalo wathuthela edolobheni laseLos Angeles. Uma usuzinzile lapho, waqala ukubhala imibhalo, ngaphandle kokulahla ukwenziwa kwamanoveli akhe. Ngokushesha ngemuva kwalokho, washicilela okulandelayo emsebenzini wakhe wokuqala: Isigodlo saphakathi kwamabili (1994) futhi Izibani zika-september (ishumi nesishiyagalolunye nesishiyagalolunye nanhlanu); ukuze uqedele ifayela le- Inkungu Trilogy.
Ngo-1999, wethula Marina, inoveli echazwe ngumbhali njengo: “… eyimfihlo kunayo yonke imisebenzi yakhe”. Ngemuva konyaka, wanquma ukubheja emphakathini wabantu abadala futhi waqala i-tetralogy Amathuna ezincwadi ezikhohliwe, ngokushicilelwa kwe- Isithunzi somoya (2001). Ngokushesha, umsebenzi uthengise ngaphezu kwezigidi eziyi-15 yamakhophi, ahlanganisa umsebenzi waseSpain.
Ukufa ngaphambi kwesikhathi
UCarlos Ruiz Zafon ushone ngoJuni 19, 2020 eLos Angeles (eU.SA), eneminyaka engama-55 futhi ngemuva kokulwa iminyaka emibili nomdlavuza wamathumbu.
Amanoveli kaCarlos Ruiz Zafón
Isigodlo saphakathi kwamabili (1994)
Izibani zika-september (1995)
I-Tetralogy Amathuna ezincwadi ezikhohliwe
Isiboshwa Sezulu (2011)
I-labyrinth yemimoya (2016)
Ezinye izincwadi zikaCarlos Ruiz Zafón
Ehlobo lika-1943, umenzi wamawashi Umbazi kaMaximilian le kwazisa umkakhe Andrea namadodana akhe —U-Allicia, u-Irina noMax— ukuthi bazohamba endaweni osebeni lwe-Atlantic, ukuze bavikeleke empini. UMax akajabule ngalesi sinqumo, ngoba akafuni ukushiya ikhaya lakhe. Ngobusuku obandulela ukuhamba, ubaba wakhe ukwazile ukumjabulisa ngemuva kokumnikeza iwashi lesiliva losuku lwakhe lokuzalwa.
Phakathi nohambo, uMaximilian uqala ukutshela izingane zakhe umlando wendlu, oqukethe okwedlule okumnyama. Kudala, indodana yabanikazi bangaphambili yayicwile yafa ezimweni ezingajwayelekile. Ngemuva kohambo olude, abakwaCarvers bafika ekhaya labo elisha, indawo engaqondakali futhi kunothuli ngenxa yesikhathi eside ingasetshenziswa; ngokushesha, aqala ukukhipha.
Ngokubambisana, amalungu omndeni asiza ngemisebenzi yokuhlanza, ebashiya bekhathele. Ngemuva kwekhefu elincane, uMax, onokuqonda futhi ongesabi, iqala ukugcina izakhi ezingajwayelekile neziphathekayo. Ukusuka lapho, le nsizwa phila izikhathi ezimnyama lapho kuhlangana ngesidalwa esibi: Inkosana yenkungu, enikela ngezifiso, kepha ngezindleko eziphakeme kakhulu.
U-Oscar Drai ubuyela eBarcelona ngemuva kweminyaka eminingi yokuphila ehlushwa yisikhathi esedlule, kulapho anquma khona ukuqala ukuxoxa indaba yakhe. Konke lokhu kwenzeka eseneminyaka engu-15 ubudala wabalekela isikole okuhlalwa kuso wayongena edolobheni. Ilukuluku lamholela ekubeni angene endlini endala eSarriá, lapho athola khona iwashi elidala lasemaphaketheni, ahamba nalo lapho kufanele ahambe ngokushesha.
oscar, othukile ngandlela thile, unquma ukubuya azobuyisa into, kepha umangazwa uMarina, omthatha ahambe noyise uGermán. Uyakwamukela ukuxolisa kwale nsizwa ngokuthatha iwashi. Ngemuva kwengxoxo, abafana bayahlangana ukuhamba emigwaqweni yaseBarcelona, ​​futhi ngaleyo ndlela bazane kangcono. Ngosuku olulandelayo, UMarina uthatha u-Oscar amyise emathuneni, lapho embonisa khona ithuna elithile.
Ithuna linetshe lethuna elinesimvemvane esimnyama esiqoshiwe, alikho igama. I-niche ithi uvakashelwe kanye ngenyanga yintokazi eyindida, oshiya kuphela rose ebomvu. Imangele, intsha iphenya ngalesi simo esibuhlungu, esiholela embonini yakudala yokufakelwa. Lapho, bathola izimfihlo ezethusayo ezungeze umnikazi wefektri: uMikhail Kolvenik.
Uhambo olwesabekayo lubaholela ekutheni babandakanyeke endabeni embi, okuyingozi ngokweqile futhi lokho kuzomaka ikusasa labo unomphela.
UMarina (Umtapo Wezincwadi uCarlos ...
E-Barcelona ethule ngemuva kokuphela kwezingxabano, abasha UDaniel Sempere uhamba ebambene nobaba wakhe kuya phambili indawo engaqondakali. Lokhu kuyakuthatha Emathuneni Ezincwadi Ezikhohliwe; lapho uphakamisa khetha incwadi, okuyinto kuzodingeka ukuthi inakekele sengathi ingcebo. Ejabule, uDaniel ukhetha umbhalo obizwa ngokuthi Isithunzi somoya, ebhalwe nguJulián Carax.
Lapho ngifika ekhaya, ngokushesha funda incwadi bese upelwa indaba, ngakho-ke unquma ukufuna eminye imininingwane ngomlobi, kepha akunamuntu omaziyo. Maduze, ugijimela eLaín Coubert, indoda engaqondakali ofisa ukuqeda yonke imisebenzi yeCarax. Lesi sidalwa esiyinqaba senza konke okusemandleni ukuthola ikhophi okungelikaDaniel.
Ngemuva kokuqhubeka nokuphenya, uDaniel ubandakanyeka kuthotho lwezimanga ezizungeze umbhali. Ukusuka lapho — phakathi kwesikhathi esedlule nesamanje— izinhlamvu eziningana ezihilelekile emfihlakalweni ziqala ukuvela. Njengokungathi ziyizingcezu ze- iphazili, yonke indaba iyanela ngokuphelele up ekugcineni i-resolver konke izingobe ezungeze itulo.
Ithunzi lomoya ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Biography » UCarlos Ruiz Zafón: izincwadi
Izincwadi zikaJJ Benítez